7Monkeys: December 2006
1 comments |	Sunday, December 31, 2006
u|efawmfu a=uuGJ&if; &yfwef@aeolyg
မိုးစဲနေ ဆိုတဲ့ အထက်က ကဗျာရေးတဲ့ အစ်ကိုကြီးဘဲ ပို့ပေးတာပါ။
0 comments |	Tuesday, December 19, 2006
Beautifully made, this mesmeric film captures the heartbreaking ruin of Burma’s young girls.
Click here to watch the 10mins trailer
2 comments |	Monday, December 18, 2006
အာဏာရှင်တို့၏ လူသားချင်းမစာနာ အမျုိးမျိုးအဖုံဖုံ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်ကျောင်းသား ကိုသက်ဝင်းအောင်ကိုရည်စူး၍ အမှန်တရားလိုလားသူ ဗမာပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားတို့၏ှ လွမ်းဆွတ်မှုကဗျာများ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်လ်ကို ပေးပို့သူကတော့ ကိုကြည်မိုး ခေါ် ကိုသံလွင်မိုးပါ။ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သည့် သတင်းအေဂျင်စီကပါ။
0 comments |	Saturday, December 16, 2006
ဒီည အမေ့ကို အရမ်းလွမ်းတယ်ဗျား.... ကလေးတွေရဲ့အသက်ဘေးရယ် ကိုယ့်အသက်ရယ်ကို ကာကွယ်ဖို့
ကျွန်တော့်မေးလ်ကိုို ဖရန့်စတားကနေမှတဆင့်သိတဲ့ သံလွင်မိုးဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးက ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ အထက်က စာကိုပါ တွဲပို့ပေးပါတယ်။
ရိုးရိုးလေးရေးထားတဲ့ ကိုနေဦးအောင်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်မသိတဲ့ တောတွင်းစစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့စာက လည်း စိတ်ဘဝင်ကို ဆွဲယမ်းနိုင်တယ်ဗျာ။ ကိုနေဦးအောင်လို မျိုး စစ်သားတွေလဲ အများကြီးပါဘဲ....မြန်မာပြည်တင်မဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာပါ။ အာဏာကိုခုတုံးလုပ်ပြီး အာဏာရှင်တွေကရမ်းချင်သလိုရမ်းတယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းခံရတာကျတော့ ဘာမှမသတ်ဆိုင်တဲ့ အပြစ်မဲ့လူသားတွေပါဘဲဗျာ။ တော်သင့်ပါပြီ။ ရပ်သင့်ပါပြီ။စိတ်တွေလဲထောင်းလို့ ကိုယ်တွေလဲကြေနေပါပြီ။ နံနက်မိုးလင်းရင် အပြုံးကိုယ်စီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မင်္ဂလာပါလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နှုတ်ဆက်ချင်ပါပြီဗျာ။
ကျွန်တော်မသိတဲ့ ဘဝတွေကို ဓါတ်ပုံ စာတွေနဲ့တကွ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူး ကိုသံလွင်မိုး
မှတ်ချက်။ ။ ခေတ်ပြိုင် တွင်လဲ ထိုင်းအခြေစိုက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရင်နင့်ဖွယ် ဘဝများကို လည်း အသည်းကောင်းရင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွင်တွေ့ရသော ကရင်တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးဘေးတွင်ရှိသော သေနတ်မှာ တကယ်တိုက်ပွဲတွင်သုံးသောသေနတ်လား ဓါတ်ပုံရိုက်ခါနီးမှ ဘေးမှာချပေးသောသေနတ်လားဆိုသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိပါ။ ကျွန်တော်သိသည်မှာကတော့ အမှန်တကယ်ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါပြီး နည်းမျိုးစုံနှင့်အနှိမ်ခံနေရသည်ဆိုတာပါဘဲ။
ကျွန်တော့်ကို အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်း ဘလောဂ်ရေးဖော် လဲဖြစ် ယုံကြည်ချက် တူတာခြင်းလဲဖြစ်တဲ့ ကိုကြယ်စင်က မေးလ်လေးပို့ပေးပါတယ်။ မေးလ်နဲ့အတူ အတက်ခ်ျဖိုင်လေးပါလာပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ စာအုပ်နာမည်က အရေးတော်ပုံ(၄)စောင်တွဲတဲ့။အောက်ကဟာက သူရေးထားတာပါ။
History is not just written in book. It's also written in heart. Can change history from books but not from souls.
အဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်တော့ အတော့်ကိုကောင်းတာနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ကျွန်တော့်လိုဘဲ မမှီလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁၉၇၄ မေ-ဇွန် အလုပ်သမားအရေးတော်ပုံ
၁၉၇၆ မတ် မှိုင်းရာပြည့်အရေးတော်ပုံ
at 6:58 PM Permalink
2 comments |	Friday, December 15, 2006
ခင်ဗျားတို့ ထပ် ထပ်ပြီး ပြောစမ်းပါဦး
အလိမ်မိုးမွှန်နေတဲံ့ အီးယောင်ဝါး ညီလာခံဆိုတာတွေ
ဓါတ်ပုံများကပြောသော ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ
photo resource:net friend Byat
အပြုသဘောဘက်ဦးတည်လာခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ (တင်မောင်သန်း)
1 comments |	Thursday, December 14, 2006
ဒီနေ့က ဘာမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်ကြည့်တော့ ရီစရာလိုလိုနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေးစရာလေးတွေရလိုက်လို့။ ဘွိုင်းဘွိုင်းမှတ်ချက်လိုပါဘဲ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း နေ့တိုင်းမျောက်နေ့တွေပါဘဲ။ ဟိုပင်ဒီပင်ကူုးနေရလို့။
Boing Boing's Monkey Day
trunk monkey 01
vulcan sock monkey
trunk monkey 02
Freedom - (Anonymous Mix)
Free Press vs. Fair Trials examines publicity in the context of the whole judicial system and media system. Afterathorough review of research into pretrial publicity, the authors argue that the criminal justice system's remedies are likely to be effective in most cases and that there are much larger obstacles confronting defendants than publicity.
How audiences are shaping the future of news and information.
By Sally Lehrman, 2006
This book examines news coverage ofachanging America. It was commissioned in early 2004 by the John S. and James L.Knight Foundation asafresh perspective on the issue of newsand newsroom diversity.
The book also includesaguide to avariety of diversity programs and resources and the results of three surveys showing trends among American journalists and in newspaper and broadcast newsrooms.
Download (Divided Downloadable PDFs)
O'Reilly Open Book Content:
Chapter 11: The Empires Strike Back
The Odd Couple — A Report on the Relationship Between the Media and the Military
By Frank Aukofer and William P. Lawrence, The Freedom Forum First Amendment Center, 1995
As always, the overriding issues between the news media and the military involve access, censorship and the timely reporting of news from the battlefield. News people, not surprisingly, want total access, no censorship, and the apability to get their stories out to their audiences quickly. Military people, not surprisingly, want the option to exercise some control for operational security purposes.
1 comments |	Monday, December 04, 2006
Here is what I read from Burmatoday.net. Plese free feel to response to this article. I will post more of any article that can straight up Min Swe's intellect, morality and thinking skill if I find any. If you can, please do so.
at 8:27 AM Permalink
0 comments |	Sunday, December 03, 2006
ကိုသံခဲ စာတွေထဲက ရှိခိုးကန်တော့တာကိုဖတ်ပြီးတော့ အတွေးနယ် တော်တော်ကို ချဲ့မိတယ်။ သူက ဒီလိုရေးထားလို့ပါ။
တပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေလာရင် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးက လူတွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေ က သူတို့ကို လက်အုပ်ရှိခိုးရတယ်ဆိုတာကိုရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ အဲဒီစာဖတ်ပြီး ကျောင်းမှာတုန်းကခံစားရတာတွေတွေးရင်းတွေးရင်း အသည်းနာလာမိတယ်ဗျာ။ ကျောင်းမှာတုန်း က ကျွန်တော်ရယ်ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက စာနည်းနည်းပါးပါးတော်တေ့ာ (ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမတော်တော်များများက ဆန်ထဲ မှာရောတဲ့ကြွက်ချီးတွေတဲ့) ခုနလို သူတို့တွေကြွလာရင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ရမယ့်အထဲမှာ ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်၅တန်းလောက်ကစတာထင်တယ်။ ဆရာမတွေက ဒီလိုသင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေလာရင် ရှိခိုးရမယ်တဲ့။ ရှိမခိုးရင်ဒဏ်ရိုက်မယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ရှိခိုးရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဒင်ဘဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်ဆရာ ဆရာမတွေက အစ ရှိခိုးကြတယ်ဗျာ။ လက်အုပ်လေးတွေကိုချီလို့။ အရာရှိကြီးတွေကတော့ မိန့်မိန့်ကြီးလိုအပ်သည်များကို မှာစားပြီးပြန်သွားကြတယ်။ ကြုံလို့ပြောရဦးမယ်။ သူတို့မလာမှီနေ့တွေဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ အလွန်ပျော်သဗျား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မလာမှီ ဖာစရာထေးစရာတွေ ဖာဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ဆရာ ဆရာမတွေအလွန်အလုပ်များကြလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို စာမသင်နိုင်ဘူးလေ။ အတန်းမော်နီတာက အစ အဲဒီလိုမျုိးကြားရရင် သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေ့ငါတို့စာသိပ်သင်ရမှာမဟုတ်ဖူး လွတ်လပ်ပြီ ဆိုတဲံ့မျက်နှာပေး နဲ့ ပြုံးဖြီးဖြီးပေါ့ဗျာ။ တခါတလေ အရမ်းရမ်းကို ဂရိတ်ကြီးတွေလာတော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပါ ပျာယာရောကူခတ်ပေးရတာပေါ့။ တစ်ခြားနိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာလဲဒီလို မရှိမဟုတ်ပါဘူး။ရှိပါတယ်။ ကွာတာက တော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာက ကြောက်စိတ်နဲ့လောကွတ်ပျုငှာဆက်ဆံရတာပါဘဲ။ အဲဒါကျိန်းသေပါတယ်။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျွန်တော့်ဆရာ ဆရာမတွေလဲ ရှိခိုးချင်တယ်ရယ်လို့တော့ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ မရှိခိုးရင် အလုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကြီးက သူတို့ကိုဖိစီးနှိပ်စက်နေတာကိုး။ အဲဒါထက် ဒီလက်အုပ်ချီတဲ့ ကိစ္စက ဘယ်လောက်ထိတာသွားခဲ့လည်းဆိုတော့ ၈၈မျိူးဆက်နောက်ပိုင်း ကလေး လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ ငါတို့ဆရာ ဆရာမတွေတောင် သူတို့ကို လက်အုပ်ချီရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကို တစ်မျိူး ကြောက်စိတ်တစ်မျိူးမသိမသာဝင်သွားတာပါဘဲ။ ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားတာ အပြစ်ပြောလို့ကိုမရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အစဦးပိုင်းပညာသင်ယူ ရာနေရာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကအစ အခြေအမြစ်မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ လိုက်နာရမယ် နာခံရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောက်တရားတွေကို သင်ယူချင်စိတ်မရှိဘဲ နဲ့ မသိမသာသင်ယူခဲ့မိလို့ပါ။ ရှိခိုးခိုင်းတာကိုပြန်ဆက်ရရင် ရှိခိုးကန်တော့တာကို မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ သူမတူအောင်တော်တဲ့ ညဏ်ကြီးရှင်ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ လက်ထက်မှာ အစပြိုးခဲ့တာပါ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ဆိုတဲ့ကာဗာယူပြီး အတင်းဇာတ်သွင်းခဲ့တာပါ။ အမှန်က မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ အလေ့အထရှိခိုးကန်တော့တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ မိမိထက် ညဏ်ပညာအရသော်လည်းကောင်း အကျင့်စာရိတ္တအရသော်လည်းကောင်း အသက်အရွယ်အရသော်လည်းကောင်း သာမှရှိခိုးထိုက်၏ လို့ ကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့ရဘူးလို့ပါ။ အတိအကျမဟုတ်ဘဲ မှားရင်လည်းမှားပါလိမ့်မယ်။ အနှစ်သာရကတောူ့ ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် မိမိထက်အသက်ပင်ငယ်သော်ငြား ရှိခိုးထိုက်၏ ဆိုတာဘဲ မဟုတ်ဖူးလားဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေပြီး ယနေ့ထက်ထိ ဆရာ ဆရာမများ နဲ့ အများပြည်သူတွေဟာ သူတို့ရင်ထဲမှာ ရိုသေလေးစားစိတ်စိုးစဉ်းမျှမရှိပါဘဲ ကြောက်စိတ်အရင်းခံပြီး ရှိခိုးနေကြရတာကိုပါ။ ရင်နာဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ရာဇဝင်ကတော့ ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးထောင် တွင်တွင်ကြီးကို ရိုင်းနေတော့တာဘဲ။ ဘယ်တတ်နိုင်ပမလဲ။ ဒီလိုဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာဘဲ။